4c west african kingdoms by Lisa Pennington 1616 views
West african kingdoms by abarnett06 1414 views
West African Kingdoms by Greg Sill 7904 views
Geography: Geography of Africa by Rebecca Subert 2569 views
1. USI.4c: European Exploration West Africa
2. Essential Knowledge Ghana, Mali, and Songhai each dominated West Africa in turn from 300 to 1600 A.D. African people and African goods played an important role in increasing European interest in world resources.
3. Key Words Mali: “where the king resides” Mansa Musa: the King of Mali who ruled from 1312 A.D. to 1332 A.D. Ghana: means king Timbuktu: the capital of Mali that became a great center of learning
4. West African kingdoms Ghana, Mali, and Songhai dominated West Africa one after another from 300 to 1600 A.D.
5. West African kingdoms Ghana, Mali, and Songhai were located in the western region of Africa, south of the Sahara Desert, near the Niger River.
6. West African kingdoms Ghana, Mali, and Songhai became powerful by controlling trade in West Africa. The Portuguese carried goods from Europe to West African empires trading metals, cloth, and other manufactured goods for gold.
7. West African kingdoms Ghana, Mali, and Songhai became powerful by controlling trade in West Africa. The Portuguese carried goods from Europe to West African empires trading metals, cloth, and other manufactured goods for gold.